बालबालिकामा देखिने तनाव, लक्षण र यसको समाधान ! - नेपाल कुरा
बालबालिकामा देखिने तनाव, लक्षण र यसको समाधान !
प्रकाशित मिति: ३ असार २०७७, बुधबार , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । तनाव जोसुकैलाई हुनसक्छ । ठूलालाई आफूले सोचको कुरा नपाउँदा तनाव हुने गर्छ भने बालबालिकालाई आफूले चाहेको खेलौना नमिल्दा, खेलौना हराउँदा, भोक लाग्दा, मन नपर्ने खाना जर्बजस्ती खानुपर्दा, होमवर्क नसकिने डर, टिचरले सोध्ने डर, पढेन भनेर शिक्षकले सजाय दिने त्रास, परिवारले आफूले चाहेको कुरा किनिदिएन भने तनाव हुने गर्छ ।
त्यस्तै, आमाबाबु अफिस जादाँ, वरिपरिको वातावरणको प्रभावका कारण, स्कुल जान मन नलाग्दा पनि तनाव हुने गर्छ । त्यसबाहेक, अभिभावकको लगातारको निगरानी, अभिभावकले वास्ता नगर्ने समस्या तथा आफूले भनेका कुरालाई महत्व नदिदा पनि बालबालिकालाई तनाव हुने गर्छ । बच्चालाई तनाव भएमा टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, जीउ दुख्ने, डरलाग्ने, डिप्रेसन हुने लगायतका समस्या निम्तने गर्दछ । कुनै कुरा, जसले मन तथा शरीरलाई असर पार्छ भने त्यसलाई तनाव भनिन्छ । तनाव दुई किसिमका हुन्छन्, सकारात्मक तथा नकारात्मक तनाव । सकारात्मक तनावले हाम्रो मस्तिष्कलाई सकारात्मक काम गर्न उत्प्ररित गर्छ भने नकारात्मक तनावका कारण हामीभित्र संचित रहेको भडास बाहिर पोखिने गर्छ । तनाव विभिन्न कारणले उत्पन्न हुने गर्छ । परिवार, पैसा, स्कुल, पढाईलेखाई यी यावत् कुराहरुका कारण मानिसलाई तनाव हुने गर्दछ ।
-विरामी परिरहने ९टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने०
कम गर्ने उपाय
अभिभावकलाई बाल्यापनमा हुने तनावबारे जानकारी दिएर पनि बालबालिकाको तनाव व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउन सकिन्छ । उनीहरुको आवश्यक्ता पूरा गरेर, उनीहरुलाई सहीरगलत , राम्रोर नराम्रोको फरक छुट्याउन सिकाएर पनि उनीहरुको तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, उनीहरुको समस्या सुनेर, उनीहरुसित कुरा गरेर, प्रोत्साहन गरेर, उत्प्रेरणा दिएर तथा प्रशंसा गरेर पनि तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, जीवनमा आएका परिवर्तनबारे अवगत गराएर, डर,त्रास सामान्य हो भनेर बुझाएर, तनाव रहित वातावरण सिर्जना गरेर, बच्चालाई एक्लो अनुभव गर्न नदिएर पनि उनीहरुको तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
आजको जीवन मंत्रः संसारले दुबै राम्रा र नराम्रा चीजहरू दिन्छन्, तर हामीले राम्रो चीज फर्कानुपर्दछ !
तपाईको आजको दिन कस्तो ? हेर्नुहोस् राशिफल
कस्तो अवस्थामा पार्टनरलाई धोका दिन पुगिन्छ ?